नक्साका जमिन विधिवत् फिर्ता ल्याइन्छ
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजनक्साका जमिन विधिवत् फिर्ता ल्याइन्छ
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको जमिन विधिवत् ढङ्गले फिर्ता ल्याइने बताएका छन् ।
आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउने विषयमा जुनसुकै लँडाई लड्न पनि आफू तयार भएको बताउँदै फिर्ता हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ पुस्तालाई सुन्दर देश, सुन्दर लोकतन्त्र र विकसित, सभ्य मुलुक सुम्पनुबाहेक आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केही नरहेको स्पष्ट पारे । नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित काठमाडौँ जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आँधी, तुफान र बाढीझैँ निर्वाचनमा अगाडि बढ्नसमेत उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
प्रचण्ड–नेपालले खास प्रतिगमनको तयारी गर्नुभएको र त्यसलाई रोक्नु आफ्नो बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दै उनले भने , “करिब दुई तिहाइको सरकार ढालेर टालटुल पारेको पुतली सरकार बनाउने तयारी थियो । ‘हर्स टे«डिङ’को त्यो राजनीति फेरि फर्काउन सम्भव छैन ।” उनले विघटित प्रतिनिधि सभा ब्यूँतिन्छ कि ? निर्वाचन हुँदैन कि ? भन्ने भ्रमको पछाडि नलाग्न र दृढतासाथ निर्वाचन तयारीसहित जनताको बीचमा जान कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।
आन्दोलन, पार्टी र सही विचार जोगाउनु आजको आवश्यकता भएको जोड दिनुहुँदै उनले मुलुक र जनताको चिन्ता छाडेर पैसा, परिवार र पदका लागि मरिमेट्नेलाई निर्वाचनमार्फत जनताले ठेगान लगाउने बताए । उनले पार्टी एकताको तीन वर्षसम्म पार्टी हल न चल भएको तर ‘दुईटा नटबोल्ट’ फेर्दा पार्टीको गति अगाडि बढेको बताए ।
उनले भने , “हामीले फेरेको पनि होइन, आफैँ फुक्लिए नटबोल्ट । खिया लागेको दुईटा नटबोल्ट के खुस्किएको थियो, पार्टी गतिका साथ अगाडि गयो ।” यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टी नेतृत्वबाटै गलत घेराबन्दी भएका कारण नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
जमिन नक्सा फिर्ता